What is GED ®? | Learn about the GED® diploma and how to take the test | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း
အဘယ်အရာကို GED ဖြစ်ပါတယ် ®? Learn about the GED® test and diploma
လူအတော်များများဟာကျွန်တော်တို့ကိုမမေး, "GED ဘာ ®?"ဒီ GED® diploma shows that you have the same knowledge as someone who completed high school in the USA. သင့်ရဲ့ GED ရယူခြင်း® diploma can help you be more successful. It can get youabetter job and allows you to go to college. Learn everything you need to know to answer the question, “အဘယ်အရာကို GED ဖြစ်ပါတယ် ®?"
What is the GED® စမ်းသပ်?
အဆိုပါ GED® test isatest of your knowledge. The name GED® is short for General Education Diploma. Passing the GED® test shows you have the same knowledge and skills asaperson who graduated from high school in the USA.
Many Americans and some refugees and immigrants were not able to finish high school. အထက်တန်းကျောင်းဒီပလိုမာမပါဘဲ, it can be hard to getagood job and succeed in the USA. But if you pass the GED® စမ်းသပ်, သင်တစ်ဦးဒီပလိုမာရ (လက်မှတ်) သင့်ရဲ့အခြေအနေမှ. ဒါဟာအထက်တန်းကျောင်းတခုတော့ဟုခေါ်သည် (HSE) ဒီပလိုမာလက်မှတ်, ဒါကြောင့်သင်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သင့်ရဲ့စမ်းသပ်ထားတဲ့ HSE စမ်းသပ်မှုအဖြစ်ရည်ညွှန်းတွေ့မြင်သို့မဟုတ်နားထောင်မည်အကြောင်း.
အဆိုပါ GED® diploma says you have the same skills as someone who completed high school. ဒါကကြီးမားတဲ့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်! မသာသင်တစ်ဦးပညာရေးရရှိပါလိမ့်မယ်, သင်မူကား, ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်အရွေးချယ်မှုရှိသည်လိမ့်မယ်.
The test take several hours. It is divided into four parts that you can take on separate days. သင်တစ်ဦးကကွန်ပျူတာပေါ်တွင်စမ်းသပ်ယူပါလိမ့်မယ်. You can take the test in English, စပိန်, or French.
There are four subjects on the test: လူမှုရေးလေ့လာမှုများ, သိပ္ပံ, သင်္ချာ, နှင့်ဘာသာစကားအနုပညာ (စာဖတ်ခြင်းနှင့်စာရေးခြင်း). You will answer many questions and write an essay.
သင်လုပ်နိုင်သည် study for the test. သင်တို့သည်လည်းလုပ်နိုင် find out how to take the test.
ဘယ်လို GED များအတွက်လေ့လာသင့်တယ်® စမ်းသပ်?
အဆိုပါ RCO’s free online GED® အတန်း cover each subject on the test. သငျသညျအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီအခါတိုင်းသင်တစ်ဦးလူတန်းစားစတင်နိုင်ပါသည်. အများစုမှာကျောင်းသားများကနှစ်လမှနှစ်ပတ်အတွင်းတဦးတည်းဘာသာရပ်ပြီးစီး. သငျသညျအချိန်မရွေးစတင်ရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်. သငျသညျသင်ခန်းစာများကိုပြန်လည်ယူနိုင်ပါတယ်. သငျသညျသငျနှငျ့အတူစတင်ချင်ရာဘာသာရပ်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်.
Does my state offer the GED® ယုံကြည်စိတ်ချရသော?
သင်က GED ယူ. မသွားနိုင်® test in every state. သင့်ရဲ့ပြည်နယ်အတွက်ကမ်းလှမ်းခဲ့သောစမ်းသပ်ရှာဖွေဖို့အောက်ကစားပွဲမှာကြည့်ပါ.
If your state does not offer GED® စမ်းသပ်, ဒါကြောင့်အဆင်ပြေမယ့်! You can still getadiploma that is just as good. You can take the TASC test or the HiSET test in your state. Look at the table again to see which one.
The HiSET test is like the GED® စမ်းသပ်. The HiSET™ diploma says you have the same knowledge and skills as someone who completed high school in the USA.
ငါ GED ကိုဘယ်လိုယူကြပါ® စမ်းသပ်?
အခမဲ့ GED® အလေ့အကျင့်စမ်းသပ်
Study all four topics to prepare for the GED® စမ်းသပ်.
အဆိုပါ GED ယူလုပ်နည်း® စမ်းသပ်
Find the information you need to register for and take the GED® စမ်းသပ်. သင်တို့ရှိသမျှလေးဘာသာရပ်များလွန်သောအခါ, you will receiveadiploma.
ငါသည်အခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကနေဒီပလိုမာများ. ငါဆဲ GED ရသင့်တယ်® ယုံကြည်စိတ်ချရသော?
သင်တစ်ဦးအထက်တန်းကျောင်းဒီပလိုမာရှိပါက, သင်သို့မဟုတ်မပြုစေခြင်းငှါတစ် GED လိုအပ်နိုင်ပါသည်® ယုံကြည်စိတ်ချရသော. သင်သည်အခြားတိုင်းပြည်ကနေကောလိပ်ဒီဂရီရှိပါက, အဆိုပါသင်တန်းများနှင့်ဒီဂရီအချို့ကိုလွှဲပြောင်းစေခြင်းငှါ,. သငျသညျကောလိပ်ကိုသွားဒါမှမဟုတ်အလုပ်တစ်ခုရဖို့ရန်သင့်အားကျောင်းမှပြီးဆုံးအထောက်အထားလိုအပ်နိုင်ပါသည်. သင့်ရဲ့ GED ဝင်ငွေ® diploma might help you.
သင် GED များအတွက်ပညာသင်ဆုရှိသည် Do® စမ်းသပ်?
အဘယ်သူမျှမ, we do not have any scholarships for GED® စမ်းသပ်မှုများ.
Here is one scholarship for people who live near Portland, အော်ရီဂွန်. သင်ပိုမိုပညာသင်ဆု၏သိလျှင်, ကျေးဇူးပြု ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ and we will list it here so that more people can find GED® ပညာသင်ဆု.
အဆိုပါ GED အပေါ်ဘာလဲ® စမ်းသပ်?